VACANCIES ( နေရာလွတ်များ ): January 2008
မျက်တွင်းဟောက်ပက် ... သူယောင်မယ်ညတွေအတွက် ... ကြယ်ကဗျာရေးမယ်သူတွေ ချီတက်လာကြပေါ့... ဟောဟိုက... ကံ့ကော်တောအုပ်ပေါ်မှာ ... ...
အဲဒီ ပြတင်းတံခါးကို … …
နေ့စဉ် မစစ်ချင်လို့ … …
ထွေရာလေးပါး အန္ဓ တွေနဲ့
ရှောင်ရှားချင်လို့ … …
မျက်နှာဖုံးယဉ်ကျေးမှု နဲ့ အသပြာကင်ဆာ
အဲလို မြို့ပြ တိုက်ပွဲတွေ အကြား
ရိုးရိုးသားသား မဖေါက်ပြားချင်လို့ … …
နောက်ဆုံး … …
လေသွေးရင်း … အေး … အေး သွားမှာစိုးလို့ … …
… ကြာပေါ့ …
အရေခွံ လဲ ခံလိုက်ရတယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 3:46 PM 1 ထင်မြင်ချက်
ကျူးကျော်ခွင့်မရ … …
ကိုယ့်မှတ်တိုင်လေးက မိုးစိုဆဲ …
သက္ကရာဇ်နဲ့အတူ … ဘ၀က
ပြိုပြိုလဲကျ … …
နှလုံးသားလေးလွင့်ကျရတာ အခါခါ …
တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ အရွှေ့မှာတောင်
ပါးလျှပ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် … …
“ မ ” က … …
သံယောဇဉ်ရဲ့ မြစ်ကျဉ်းလဲဖြစ် …
အိပ်မက်ထဲက ပုံပြင်လဲဖြစ် …
ဖောရိမ်းမိတ် ပန်းသီးလဲဖြစ် …
နှလုံးသားရဲ့ နဂ္ဂတစ် ဟောင်းလဲဖြစ် …
ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ရဲ့ …
နယ်ချဲ့ ဘုရင်မလဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် … …
( “ ၀င်္က ကချေသည် ” မှ )
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:26 AM0ထင်မြင်ချက်
စာအမျိုးအစား “ ၀င်္က ကချေသည် ” - ကဗျာစုစည်းမှု
… မလှမပ … ည …ကဗျာ … တစ်ပုဒ် …
ပျော်ဝင်ငြိမ်သက်ဆဲ … …
သစ္စာတရား … … ခါးတယ် …
မြင်ရ တွေ့ရကြာတော့လဲ … …
ရဲ့ရင့်ရီဝေတဲ့ သက်ရှိ …
အမြင်မပါဘဲ ထုဆစ်သည် … …
စူးစူးစိုက်စိုက် … ကြွေဆင်းခဲ့တယ် … …
ကဲ … …
မမီမကန်းနဲ့ လွမ်းရဲတဲ့ကောင် …
တစ်နွေခွဲစာလောက် မိုက်ခဲ့ပြီ … …
သက်တံ့တွေ အစမ်းပွင့်နေကြပြီ … …
( “ ၀င်္ကက ကချေသည် ” မှ )
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:10 AM0ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော် ကျောင်းသားဘ၀မှာ ကဗျာစာအုပ်တွေတော်တော်များ ရေးဖြစ် ၊ ထုတ်ဝေဖြစ်ပါတယ် …
ထုတ်ဝေတယ်ဆိုတာကလဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ရပါဘူး … ကိုယ့်အ၀န်းအ၀ိုင်းသေးသေးလေးထဲက သူငယ်ချင်းတဖြစ်လဲ ကဗျာပရိသတ်များအတွက် ၊ နောက်တစ်ခုကတော့ အမှတ်တရလေးတွေအဖြစ် ရည်ရွယ်ခဲ့ရခြင်းပါ …
ဒီ “ ၀င်္ကကချေသည် ” ကဗျာစာအုပ်လေးကတော့ ဘ၀မှာ အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံး ကဗျာစာအုပ်လေးပါပဲ … စာရေးသူများကတော့ ChIroN ၊ မင်းသစ်နီ ၊ ယွန်းသဲ့မိုး ၊ ကျွန်တော် တည်ညိမ်းကို တို့ဖြစ်ပါတယ် … ကဗျာစာအုပ်လေးထဲက ကဗျာများကိုတော့ ကျွန်တော် နဲ့ ChIroN တို့ရဲ့ ဘလော့တွေမှာ ထပ်တူတင်ပြသွားပါ့မယ် … ကဗျာစာအုပ်လေး ပြန်ရလာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ ChIroN ကိုပဲကျေးဇူးတင်နေရပါတယ် …ကျွန်တော့်မှာက ကော်ပီမရှိခဲ့ဘူးဗျ …
ကျောင်းတော်ထဲက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်ခုန်သံများ ကို မျှဝေခံစားပေးကြပါအုံးဗျာ …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:47 PM 1 ထင်မြင်ချက်
မင်းကိုက်လက်စ သစ်သီးတစ်လုံး ဖြစ်တယ် … …
ရဲရင့်နေချင်သေးရဲ့ ... …
ဘယ်လောက်များ မိုးအုပ်ပေးနိုင်မှာတဲ့လဲ … …
တစ်ခါက တယော ကကြိုးတွေသယ်ရင်း
ထားရစ်ခဲ့ ကောင်မလေးရယ် …
….. ကောင်း …. သော ….. ည ….. ပါ …… ကွယ့် ….. ………..
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:24 AM0ထင်မြင်ချက်
နံနက်ခင်းကို မိုးပြီး ကြည့်ဖြစ်တယ် … …
ဖန်ဆင်းလိုက်ချင်ရဲ့ … …
အလင်းစ တွေ …ဝေ… လို့ … …
အတူတကွ ဟောင်းနွမ်းလိုက်ကြတာပေါ့ကွယ် … …
အစိုက်အပျိုး ခံရအုံးမှာလဲ … …
စာလုံးမပေါင်းခဲ့ချင်ဘူး … …
ခူးခါနီးမှ ဖူးတဲ့ပန်း …
အနမ်းတစ်ခုရဲ့ သိမ်းသွင်းမှု ဒီဂရီ …
ဖေဖော်ဝါရီ နေကြတ်တဲ့အခါ … … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 1:14 AM3ထင်မြင်ချက်
( အမှတ်မရှိ … )
အားကိုးတကြီ လှန်ခဲ့မိပြန်တယ် … …
တိုက်ကျိုတိုက်ကြားက လ နဲ့
ညဟာ ဘယ်တော့မှ စိတ်ဝမ်းမကွဲခဲ့ဘူး … …
နှစ်ဝါတစ်နီ ပြခံရ … …
တစ်ယောက်သောသူရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ … …
သက္ကရာဇ်ကို ဖြို … ဖြိုချ
ဘ၀မှာ … ဘာမှ …
ငါ … အပိုင်မရခဲ့ပြန်ဘူး … …
ပင်လယ်ဟာ ကျယ်လွန်းတယ် … …
လက်ယှက်ထိုးမျက်နှာဖုံးတွေ ချွတ်တဲ့အခါ …
တောက်ပစွာ မှောင်မိုက်ခဲ့ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 7:40 PM 1 ထင်မြင်ချက်
အတိတ်က ဘ၀ကို မေ့ခဲ့ …
ဘ၀က ငါ့ကို မေ့ခဲ့ …
နောက်တော့ ငါလဲ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေ့ခဲ့ …
ထားလိုက်ပါတော့ကွယ် … …
ခုထိ… ငါ …
အသက်ရှူနေတုန်း … …
ဒီလိုနဲ့ … မုတ်သုံတို့နိုးပြီ …
သနပ်ခါးနံ့သင်းတဲ့ ညနေခင်းကို ဖွင့်ချင်ပြီ … …
ကိုယ့်မာနကိုယ် သတ်လို့ကြိုနေကွဲ့ …
အတောင်ပံဖြန့်ရင်းဝင်ခဲ့မယ် … … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:36 PM0ထင်မြင်ချက်
သူ့ သဘောသူဆောင်တဲ့ မနက်တွေမှာ
အသက်ရှုခြင်းဟာ အသက်ရှုခြင်းအတိုင်း …
နေထွက်ခြင်းဟာ နေထွက်ခြင်းအတိုင်း …
ရာသီလွဲ မျက်နှာမူခြင်းဟာလဲ အဲဒီအတိုင်း …
အထားအသိုမှားခဲ့တယ် … …
တွေ့နေကြ သူမ ဟာ ပျောက်ဆုံးလို့
အလေ့ကျသစ်ပင်ဆန်ခဲ့တယ် … …
နေပေါ်မှာ နေပူစာလှုံခဲ့တယ် … …
လှံစိုက်ရာ မြေနိမ့်ခဲ့တယ် … …
သူသူ ငါငါ ထောင်ကြတဲ့ လက်ချောင်းများ …
“ အင်္ဂုလိမာလ ” သာရှိခဲ့ရင် … … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:48 PM2ထင်မြင်ချက်
ဒါဟာ … နင့်ရဲ့ …
ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက် သိုးယောင်ဆောင်ခြင်းလဲ … …?
မင်းတို့ကောင်းကင်နဲ့ မဆန့်ခဲ့ဘူး … …
ပင်လယ်ကိုလဲ ကူးခဲ့ဖူးပြီ … …
ရာသီလွန်ဝှက်ဖဲတစ်ချပ်ကို … လွမ်းခဲ့ …
မှော်ရောင်တွေ မလက်သင့်ဘူး … …
အာရုဏ်ဦးကို မေ့မေ့ မူးမူး ခူး
ဘယ်လောက်များ ရူးလိုက်သလဲလို့ … …
ငါ့ နှုတ်ခမ်းတွေလဲ ဖုန်တက် …
ဖြစ်ဖြစ် မြောက်မြောက် အလွမ်းခန်းပေါ့ … …
( ၂၀၀၁ ခုနှစ် ၊ “ မခင်းကျင်းမိသောအိပ်မက်များ ” မှ )
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 8:54 PM3ထင်မြင်ချက်
နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၆ )
နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၆ )
အချိန်တန်တော့ ပန်းပဲသမားလေး အိမ်ပြန်လာပါတယ် … ခါတိုင်းလို ပန်းသီးပင်လေးအောက်မှာ စကားလက်ဆုံကျရင်း အချိန်တွေကို ကုန်လွန်စေခဲ့ကြတာပါ … ညစာစားချိန်အတွက် ပန်းပဲသမားလေးက သတိပေးတဲ့အခါ အိပ်ဆေးကို အရင်သောက်ချင်ကြောင်း နတ်သမီးလေးကပြောပါတယ် … နဂို ကတည်းက ချစ်ရသူအိပ်ရေး၀၀ အိပ်စေချင်တဲ့ ပန်းပဲသမားလေးကတော့ နတ်သမီးလေးတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အိပ်ဆေး တိုက်လိုက်ပါတယ် … ချစ်ရသူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက်တွဲ ရင်း ညစာစားဖို့ စားပွဲလေးဆီရောက်လာတဲ့ အခါ … စားပွဲပေါ်မှာ ဘာဆိုဘာမှခင်းကျင်းမထားလို့ ပန်းပဲသမားလေး အံ့သြသွားပါတယ် … နတ်သမီးက တခစ်ခစ် ရယ်ပြီး နတ်တို့သာစားသော အဟာရများကို တမဟုတ်ချင်း ဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ် … အရာရာမှာ ဒူးတုတ်ကျသွားတဲ့ ပန်းပဲသမားလေးဟာ … ထူးဆန်းဖွယ်ရာများ ၊ မဆင်မကြင်နောင်တတို့ တပွေ့တပိုက် …… ချစ်ရသူဝမ်းထဲမှာ… သူယူလာခဲ့တဲ့ အိပ်ဆေးက ရောက်နှင့်နေပြီ … နတ်သမီးလေးကတော့ တစ်ချိန်လုံးသူတိမ်းညွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ ပြုံးလို့ …
နတ်သမီးလေးလက်ကိုဆွဲပြီး ထိုင်နေကြ ပန်းသီးပင်လေးဆီကိုပြေးသွားတော့တယ် … ဒီအချိန်ကျမှ ကျခဲ့ရတဲ့မျက်ရေတွေကတော့ ဘ၀ကို အစကပြန်ပြီး ထုဆစ်ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး … နတ်သမီးလေးကို ရင်ခွင်ထဲမှာထားပြီး စကားပေါင်းများစွာကို ပန်းပဲသမားလေးပြောခဲ့ပါတယ် … နတ်သမီးလေးကတော့ ပန်းပဲသမားလေးရဲ့ ရင်ခွင်ထက်မှာ အိပ်လို့ …
၁၂ နာရီမထိုးခင် အထိတော့ ပန်းသီးပင်လေးရဲ့အောက်မှာ ချစ်သူနှစ်ယောက် ရှိနေကြတာပါ … အချိန်ဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဆွဲနှုတ်သွားခဲ့တယ် …
အဲဒီအချိန်ကစပြီး … ရွာလေးမှာ နေ့ နဲ့ ည ဆိုတာ အတိအလင်းရှိလာသလို … ပန်းသီးပင်လေးနဲ့ ပန်းပဲသမားလေးကို တတွဲတွဲ မြင်နေရလေ့ ရှိတယ် …
နောက်တော့လဲ … ပန်းသီပင်လေးကတော့ သူ့ဟာသူရှိပြီး ပန်းပဲသမားလေးကတော့ အိပ်ရာပေါ်လဲလို့ …
ဆေးဆရာတိုင်းက ပန်းပဲသမားလေးကို လက်လျော့ထားရတဲ့ အချိန်မှာ … ပန်းသီးပင်လေးမှာ … တစ်ရွာလုံး မွှေးမြတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးသီးလာတယ် … ……………. …………. ………
… … ပုံပြင်လေးကို ခံစားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ဒီပုံပြင်ရေးနေတုန်းမှာ ကျွန်တော့်ကို မေးကြတာလေးတွေရှိပါတယ် … ဒီနေရာမှာ ပြောပါမယ်ဗျာ … ဒီပုံပြင်ဟာ ဘယ်နေရာကမှ ဘာသာပြန်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ … ကျွန်တော့်စိတ်ကူးယဉ်မှု သက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ် … အချိန်ပေးပြီးခံစားပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ….. ….
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:36 PM3ထင်မြင်ချက်
နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၅ )
နောက်ပိုင်းရက်များမှာတော့ ပန်းပဲသမားလေးနဲ့ နတ်သမီးလေး ဟာ … စားချိန်ကလွဲရင် ပန်းသီးပင်လေးအောက်မှာပဲ တတွဲတွဲရှိနေခဲ့ကြတယ် … အဲဒီ ပန်းသီးပင်လေးဟာလဲ နတ်သမီးလေး အလိုမကျတိုင်း တိုင်တည်ပြီး ငိုနေကြ ပန်းသီးပင်လေးပေါ့ … တစ်နေကုန် ပန်းသီးပင်လေးအောက်မှာ နှစ်ယောက်သားရှိနေခဲ့ပေမယ့် ညပိုင်းတွေမှာတော့ ပန်းသီးပင်လေးကိုအဖော်လုပ်ပေးခဲ့တာ နတ်သမီးလေးတစ်ယောက်ထဲပါ … အခုဆိုရင်နတ်သမီးလေး မအိပ်တာ ၁၀ ရက်ရှိပါပြီ …
တစ်ရက်မှာတော့ … နတ်သမီးလေးမအိပ်ပဲနေခဲ့တာ ကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ပန်းပဲသမားလေးသိသွားပါတယ် … ဘယ်သူမဆို ချစ်ဦးသူအတွက် အေးမြမှုတွေကိုပဲပေးချင်ကြပါတယ် … နတ်သမီးလေးကို ရင်ခွင်အစုံမှာ ထွေးပွေ့ထားရင်း အိပ်စက်ခြင်းဆို တာလိုအပ်တဲ့ အကြောင်း ၊ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်ကြောင်း ပန်းပဲသမားလေးက တဖွဖွပြောပါတယ် … နတ်သမီးလေးကတော့ ရင်ခွင်ထောင့်လေးမှာ ပြုံးပြုံးလေးနားထောင်ရင်း ချစ်ရသူပြောစကားတိုင်း အရာရာခေါင်းငြိမ့်နေတာပေါ့ …
ပန်းပဲသမားလေးက … ဒီညနေမှာ နတ်သမီးလေး အတွက် အိပ်ဆေးယူလာမယ့် အကြောင်း ၊ နောက်နောင် ည တွေမှာ အဲဒီအိပ်ဆေးကြောင့် အိပ်စက်ခြင်းအကျင့်တွေပြန်ရလာ ပြီး နတ်သမီးလေးအတွက် သူစိတ်အေးရမယ့် အကြောင်းတွေပြောပါတယ် …
အဲဒီအိပ်ဆေးကိုနတ်သမီးလေး မသောက်ချင်ကြောင်း ငြင်းပါတယ် … ပန်းပဲသမားလေးကမေးတော့ … ဒီနေ့ဟာ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ပြည့်တဲ့နေ့ … သူမ မပျောက်ကွယ်မခြင်း ချစ်ရသူနဲ့ အတူတူပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သွားချင်တဲ့အကြောင်း မျက်ရေတွေနဲ့ပြောပြပါတယ် … ပန်းပဲသမားလေးကတော့ ရယ်မြဲရယ်လို့ … နတ်သမီးလေးပြောတဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်တွေကို အစကတည်းက မယုံကြည်ခဲ့တဲ့အကြောင်း … နတ်သမီး နဲ့ သာမန်လူသားတစ်ယောက်ဆုံတွေ့ဖို့ဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ကြောင်း … အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့ နတ်သမီးလေး ပုံမှန်အိပ်နိုင် ဖို့အရေး အိပ်ဆေးမဖြစ်မနေ လိုအပ်ကြောင်း ကိုပဲ ဇွတ်ပြောပါတော့တယ် …
ပန်းပဲသမားလေး ပန်းပဲဖိုကိုထွက်သွား ပြီးကတည်းက … နတ်သမီးလေးဟာ နတ်တို့သာစားကြတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ဖန်ဆင်းပါတော့တယ် … အရာအားလုံးဖန်ဆင်းပြီးချိန်မှာ ရွာသူရွာသားတွေကို အဲဒီစားသောက်ဖွယ်ရာတွေ ဝေငှပါတယ် … တစ်ဘ၀မှာ တစ်ခါသာ ခံစားဖူးတဲ့ အရသာအတွက် သူမရဲ့ တဲအိမ်လေးကတော့ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ထုံဝန်းလို့နေခဲ့တယ် …
အားလုံးပြီးဆုံးသွားတော့မှ သူမရဲ့ ပန်းသီးပင်လေးအောက်မှာထိုင်ရင်း သူမရဲ့နောက်ဆုံးသောချစ်ခြင်းအိပ်မက်တွေကိုဖျက်မယ့် ချစ်ရသူရဲ့ အိပ်ဆေးတစ်ခွက်ကို စောင့်မျှော်နေပါတော့တယ် …
အဲဒီညက … ကြယ်ပေါင်းစုံလင်းကြတယ် … လရဲ့အလင်းရောင်ရတဲ့အချိန်ကိုနေ့ ၊ အမှောင်လုံးလုံးကျရောက်ချိန်ကို ည လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရွာလေးအတွက် … ကြယ်ပေါင်းစုံလင်းတဲ့ညလေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် …
နှင်းတွေကလဲ… ခါတိုင်းလို သဲကြီးမဲကြီး ရွာမနေကြတော့ဘူး … အလွမ်းရဲ့အကြောင်းကို သူတို့ကြိုပြီး သိနေကြ သလိုလို …
… … ဆက်လက်ရေးသားပါမည် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:34 PM0ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော် နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား ဘ၀က “ ၀င်္ကကချေသည်” ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ် … ပါဝင်ရေးသားကြသူတွေကတော့ ChIroN ၊ မင်းသစ်နီ ၊ ယွန်းသဲ့မိုး နဲ့ ကျွန်တော် တည်ညိမ်းကို တို့ပါပဲ … အဲဒီစာအုပ်လေးထဲက ကျွန်တော် အမှတ်ရနေတဲ့ ကဗျာ လေးတစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ် …
ရမ်တစ်ပက်စာ မူးနှင့်ပြီ … …
မီးကုန်ယမ်းကုန် ဝေ လို့ … …
ရက်ရာဇာနဲ့ တွေ့ရင်ပြောပေါ့ …
… ဒီမှာ … …!
ကျွန်တော်က စနေသားပါ … …
အရောင်ပြောင်းဖို့သင့်ပါပြီ ကံကြမ္မာတို့ရယ် … …
ကြယ်ကဗျာရေးမယ့်သူတွေ ချီတက်လာကြပေါ့ …
… ဟောဟိုက …
ကံ့ကော်တောအုပ်ပေါ်မှာ … …
( ၂၀၀၂ ခုနှစ် ၊ “၀င်္ကကချေသည်” မှ )
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:19 PM 1 ထင်မြင်ချက်
ပြာသိုလပြည့် ( အမေနေ့) က ကျွန်တော့် မေမေနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်ပါတယ် … စိတ်ထဲမှာ ဘာဖြစ်သွားတယ်ရယ်တော့မသိဘူး…မေမေ့ဆီက ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တောင်းမိပါတယ်… ဦးဘုန်းနိုင်ရဲ့ တပည့်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်မေမေ ချက်ချင်းရေးပေးလိုက်တဲ့ကဗျာလေးကို အမှတ်တရ အဖြစ်တင်လိုက်တာပါ … အမေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ သစ်ရိပ်တစ်ခုပါပဲ … ….
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:53 AM3ထင်မြင်ချက်
နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၄ )
ကျွန်တော့်ရဲ့ နတ်သမီးအိပ်ဆေး ပုံပြင်လေး မနက်ဖြန်မှာ အဆုံးသတ်ပါမယ် ….
ပြန်မချစ်ပဲ နေနိုင် သလား ?... ဒီမေးခွန်းဟာ သူမအတွက်မဟုတ်တော့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ … ပန်းပဲသမားလေးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မေ့မျောသွားကတည်းက သူမရဲ့ အချစ်တွေစတင်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် … ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့တဲ့ နောက်မှာတော့ … သူမရဲ့ ဘ၀ကို အမှန်အတိုင်း ပန်းပဲသမားလေးကိုပြောပြလိုက်ဖို့ နတ်သမီးလေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် … အကြောင်းစုံကိုသိသွားတဲ့အခါ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ လုံးလုံး ရွာလေးကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ သူမကို ပန်းပဲသမားလေးမုန်းသွားလိမ့်မယ်လို့လဲ သူမယုံကြည်ထားပါတယ် … ဒါဟာ ပန်းပဲသမားလေးရဲ့ ချစ်ရသူနဲ့ကွေကွင်းခြင်းဒုက္ခကို ကယ်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် လို့လဲ ထပ်မံ ယုံကြည် ထားပါတယ် …
နောက်တစ်နေ့ မနက်စာစားကြတော့ အကြောင်းစုံကို နတ်သမီးလေးက ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ် … အဲဒီအချိန်ကစပြီး ၃ ရက်လုံးလုံး ပန်းပဲသမားလေးက နတ်သမီးလေးကို စကားမပြောတော့ပါဘူး … ပန်းသီးပင်လေးအောက်မှာ ညစဉ်ညတိုင်း ငိုရခြင်းဟာ နတ်သမီးလေးအတွက်တော့ အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတော့တယ် … နတ်သမီးလေးမအိပ်ခဲ့တာလဲ ၃ ရက်လုံးလုံးပါပဲ …
၄ ရက် မြောက်နေ့မှာ နတ်သမီးလေး တဲအိမ်လေးထဲ ပြန်ရောက်လာတော့ မွှေးမြသော အသားကင် ၊ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများ … အရာရာဟာ ရွာကလေးကို သူမ စရောက်လာခါစက ပထမဆုံးစားသောက်ခဲ့ရတဲ့ မနက်စာအတိုင်းပါပဲ … ထူးခြားလာတာလေးတွေကတော့ … ဒိန်ခဲ ၊ ၀ိုင်အရက် ၊ စားပွဲအလယ်က ပန်းခြင်းလေး နဲ့ စားပွဲထိပ်မှာ သူမကို အပြုံးနဲ့ ဆီးကြိုနေတဲ့ ပန်းပဲသမားလေး တို့ပါပဲ … သူမအတွက်ကတော့ အံ့သြပြီးရင်း အံ့သြရင်းပါပဲ … သူမအတွက် လှိုက်မောဖွယ်ရာတစ်ခုကတော့ နွေးထွေးတဲ့ ကြည်နူးခြင်းတွေ ရင်ဘတ်ထဲကို တိုးတိုးပြီးဝင်ရောက် နေခြင်းပါ … ပန်းပဲသမားလေးက သူမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး သူ့ရဲ့ နံဘေးမှာ ထိုင်ခိုင်းပါတယ် … ပြီးတော့ တောက်ပလွန်းတဲ့ အနမ်းတစ်ခုကို နတ်သမီးလေးရဲ့ပါးမှာ စိုက်ပျိုးပေးပါတယ် … နတ်သမီးလေးရဲ့ အချစ်ကို ထင်ရှားပေါ်လွင်လာစေချင်လို့ ၃ ရက်လုံးလုံး လစ်လျူရှုခဲ့တဲ့အကြောင်း ၊ ဒါပေမယ့် စောင့်ကြည့်နေခဲ့တဲ့အကြောင်း တွေပြောပြရင်း … သူတို့ရဲ့ နံနက်စာစားပွဲလေးဟာ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ထုံမွှန်းနေခဲ့တော့တယ် …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:22 AM0ထင်မြင်ချက်
နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၃ )
အိပ်ရာပေါ်က လူးလဲ ထပြီး သူမကိုယ်သူမ ဘာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုစဉ်းစားရ ၊ မွန်ရည်ခံ့ညားလှတဲ့ လူရွယ် ၊ လတ်ဆတ်သော စားသောက်ဖွယ်ရာများ ၊ အရာရာဟာ သူမကို အံ့သြပြီးရင်း အံ့သြစေခဲ့ပါတယ် … လူရွယ်ဟာ ရွာကလေးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်လိုမှုကိုခံရတဲ့ ပန်းပဲသမားလေး မှန်း နတ်သမီးလေး သိပေမယ့် ၊ ပန်းပဲသမားလေးကတော့ ဖြူစင်ဝင်းပလှတဲ့ သူမဟာ မျက်စိလည်လမ်းမှားလာတဲ့ သာမန်လူသားမိန်းမပျိုလေးအဖြစ်ပဲ သိပါတယ် … စူးရှနက်ရှိုင်းတဲ့ အပြန်အလှန်အကြည့်တွေရဲ့အကြား တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို တစ်ယောက်ဝှက်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး မနက်စာလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ စားသောက်ကြပါတယ် … ပန်းပဲသမားလေး က နတ်သမီးလေးနဲ့ဆုံဆည်းခဲ့ပုံတွေကိုပြောပြ ၊ နတ်သမီးလေးကတော့ သူမအကြောင်းကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လိမ်ပြောရနဲ့ ရွာကလေးမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲပဲ ရှိနေကြတဲ့ ပုံစံမျိုး တိတ်ဆိတ်လှပစွာ စီးမျောနေကြပါတော့တယ် …
နတ်သမီးလေးက ရွာကလေးကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီမယ်ဆိုတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်း ပန်းသီးခင်းကြီးတစ်ခုကို သူမရဲ့တဲအိမ်လေးနားမှာပဲ ပန်းပဲသမားလေးမသိအောင် ဖန်ဆင်းပါတယ် …သစ်သီးရိက္ခာအတွက်ရွာသားတွေ အဝေးကြီးမှာ ရှာဖွေစရာမလိုအောင်ပေါ့ … ဒိန်ခဲ လုပ်နည်းနဲ့ ၀ိုင်အရက်ချက်နည်းတွေကို ပန်းပဲသမားလေးကို သင်ပေးပြီး အတူတကွ ချက်ပြုတ်လုပ်ကိုင်ပါတယ် … အဲဒီချက်ပြုတ်တဲ့အလုပ်ဟာ တစ်ရက်ထဲပြီးမသွားပါဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွာသူရွာသားတွေကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အလကားဝေငှနေရလို့ပါပဲ … ချက်ပြုတ်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်ကနေပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုသလောက်ရနေသလဲကို ဘယ်သူမှစိတ်မ၀င်စားကြသလို ဘယ်သူမှလဲအရေးတယူလုပ်ပြီး မမေးကြပါဘူး …
ဒီလိုနဲ့ …. ရက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ပန်းပဲသမားလေးနဲ့နတ်သမီးလေးရဲ့ သံယောဇဉ်ဟာလဲ ဖျက်ဆီးဖြိူခွဲလို့မရလေပါပဲ … ကြင်နာယုယမှု ၊ နားလည်သိတတ်မှု ၊ အေးမြသောအပြုံးများ ၊ တင်းကြပ်လာသောကြိုးများ … အစရှိသော ချစ်ခြင်းရဲ့ အလိုများအရ … တစ်နေ့မှာ ပန်းပဲသမားလေးက နတ်သမီးလေးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါတော့တယ် … နတ်သမီးလေးအတွက်တော့ ပန်းပဲသမားလေးရဲ့ စကားဟာ မွှေးမြနေရမယ့် အစား ပူလင်းပြင်းရှမှုတွေကိုပဲ ခံစားနေရပါတော့တယ် … နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ လုံးလုံး သူမရဲ့ နတ်ဗိမ္မာန်နဲ့ ရွာလေးကိုလဲ ဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးပြီ … သူမရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာလဲ ဖြူစင်တဲ့ ပန်းပဲသမားလေးကို တစ်သက်လုံးခံစားစေရအောင် လုပ်ခဲ့မိပါပြီ … မကြာခင်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားရတော့မယ့် သူမကို ဘာလို့များချစ်မိသွားပါသလဲ … အဲဒီတစ်ညလုံး … ပန်းသီးပင်လေးအောက်မှာ နတ်သမီးလေး ငိုခဲ့ရတယ် …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 1:15 AM0ထင်မြင်ချက်
နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၂ )
မဝေးတော့တဲ့ နှစ် ၅၀ အတွက် နတ်သမီးလေးမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရရုံ ကလွဲရင် ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး … အဲဒီနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ကုန်လွန်ဖို့ နတ်သမီးလေးစဉ်းစားရပါတော့တယ် … နတ်မင်းကြီး ဇု ထံသွား ပြီး သူမ ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါတယ် … ဇု ကတော့ မွန်မြတ်ရာအလုပ်တစ်ခု ကို စိတ်ထားသန့်သန့်နဲ့ လုပ်ဖို့ပဲ အကြံပေးပါတယ် … နတ်သမီးလေးရဲ့ဘ၀တစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးကို အာရုံဖြန့်ကျက်ခံစားပါတော့တယ် … သူမရဲ့ ဗိမ္မာန်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရ တဲ့ ရွာလေးကို အရင်ဆုံး သိရပါ့တယ် … နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ လုံးလုံး သူမကတော့ အပျော်တွေထဲ မှာစိမ့်ဝင်နေခဲ့သမျှ ၊ သူမကြောင့် ဒုက္ခများစွာခံစားနေရတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေအတွက် ရင်နင့်အောင် ခံစားခဲ့ရပါတယ် … ရွာလေးအတွက် တစ်ခုခုပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ နတ်သမီးလေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် …
ကြယ်ကြွေတစ်စင်းနဲ့အတူ ရွာလေးဆီကို နတ်သမီးလေး ရောက်ရှိလာပါတော့တယ် …
ရွာသူရွာသားတွေအတွက်တော့ ပထမဆုံးမြင်ဖူးတဲ့ အလင်းရောင်ပါပဲ …
သဲကြီးမဲကြီးကျဆင်းနေတဲ့နှင်းတွေအကြား အဖြူရောင်ခြုံလွှာပါးနဲ့နတ်သမီးလေးဟာ ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုစတင်ခံစားနေရပါတော့တယ် … သက်တမ်းကုန်ချိန်နီးလေလေ စွမ်းအားတွေကျဆင်းဆင်းလေလေ မို့ ရွာလေးကို ခြေချမိတဲ့တခဏမှာပဲ နတ်သမီးလေး မူးမေ့လဲကျသွားပါလေရော … လရောင်ဖြာတဲ့ည … နတ်သမီးလေး လန့်နိုး လာချိန်မှာ …
မွှေးမြသော အသားကင် ၊ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများ ၊ တည်ငြိမ်သော လူရွယ်တစ်ဦး တို့
နတ်သမီးလေး အနားမှာ ရှိနေကြပါတယ် …သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလဲ နွေးထွေးလှတဲ့ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေနဲ့ပေါ့ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 5:57 PM0ထင်မြင်ချက်
ပင်လယ်ဟာ ကြွတက် လာပြီး
မိုး အဖြစ် ပြန်ရွာတယ် … …
အရာရာ လွင့်စင် လို့
မရှိ ခြင်း တွေပဲ ရှိ လာတယ် … …
ရောင်စဉ်ဖြာမှု တွေ ကင်းတဲ့ အခါ
ဘ၀ ဟာ ကိုယ်ရှိန်သတ်ပြီး
“ သုည ” မှာ အလည်ရပ်တယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 3:29 AM3ထင်မြင်ချက်
(၁၁) Artemis – Apollo ရဲ့ ညီမ ၊ အပျိုစင် နတ်ဘုရားမလေး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း “ဂရိနတ်ဘုရားများ (၃) ” မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ … သူမဟာ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကို စောင့်ရှောက်သလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုလဲ ထိန်းချုပ်ပါတယ် …သူမကို Ortygia ကျွန်းမှာမွေးဖွားခဲ့ ပါတယ် …
(၁၂) Hera - နတ်ဘုရားများရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်ပါတယ် …ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမဟာ နတ်ဘုရားတို့ရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ Zeus ရဲ့ ညီမ ဖြစ်သလို ဇနီးလဲဖြစ်ပါတယ် … ရောမတွေကတော့ သူမကို Juno အဖြစ်သိကြပါတယ် … လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နတ်ဘုရားမဖြစ်ပါတယ် …
Olympians တွေအပြင် ဂရိတို့ရဲ့ နယ်မြေဒေသကွဲပြားမှု ၊ အယူဝါဒ အလိုက် အခြား နတ်ဘုရားများလဲ ရှိနေပါသေးတယ် …
(၁) Nymphs - မြစ်ကိုစောင့်ရှောက်သောနတ်သား
(၂) Naiads - နွေဦးရာသီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နတ်ဘုရား
(၃) Dryads - ရုက္ခစိုး
(၄) Iris - သက်တံ့ ကိုစောင့်ရှောက်သော နတ်သမီး
(၅) Kora - ရာသီဥတု ကိုစောင့်ရှောက်သောနတ်ဘုရား
(၆) Selene - လ နတ်သမီး
(၇) Aether - အလင်းနတ်သား
(၈) Eos - အမှောင်နတ်သမီး
(၉) Aeolus - လေနတ်သား
(၁၀) Hypnos - အိပ်စက်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်သောနတ်သား
(၁၁) Nike - အောင်မြင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသောနတ်သမီး
(၁၂) Poena - အပြစ်ပေးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသောနတ်သမီး
(၁၃) Nemesis - ဂလဲ့စားခြေခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသော နတ်သမီး
(၁၄) Morpheus - အိပ်မက်နတ်သား
ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့ပြီးသော နတ်ဘုရားတွေ အပြင် အခြားအခြားသော ဂရိ ရိုးရာ ယုံကြည်မှုများအရ နတ်ဘုရားများရှိနေပါသေးတယ် … အကုန်လုံးကိုသာရှာဖွေရေးသားနေရမယ်ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော့် ဘလော့လေး “ ဂရိနတ်ဘုရားကျမ်း ” ဖြစ်သွားမှာစိုးပါတယ် … နတ်ဘုရားအချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ရုံသက်သက်ပါ … ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်ပါရစေ …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 10:25 PM0ထင်မြင်ချက်
(၆) Hephaestus - မီးတောင်ကိုစောင့်သော ၊ ပန်းပဲပညာကို စောင့်ရှောက်သော နတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် … အလှ နဲ့ အချစ် နတ်ဘုရားမ Aphrodite ( ရောမ အခေါ် Venus ) ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်ပါတယ် …
(၇) Poseidon - အမည်များစွာရှိတဲ့ ထူးခြားသောနတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် … အထင်ရှားဆုံးကတော့ ပင်လယ်ကိုစောင့်ရှောက်သော နတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် … Zeus နဲ့ ညီအစ်ကို ဖြစ်ပြီး စောင့်ရှောက်လွှမ်းမိုးဖို့ နယ်ပယ်ခွဲဝေရာမှာ Zeus ကကောင်းကင်ကို တာဝန်ယူပြီး Poseidon ကတော့ ပင်လယ်ကိုတာဝန်ယူခဲ့တာပါ … သူဟာ အသက်အငယ်ဆုံး Titan နတ်ဘုရား Cronus နဲ့ နတ်ဘုရားများရဲ့ မိခင်လို့ ဂရိတွေသတ်မှတ်ကြတဲ့ Rhea နတ်ဘုရားမ တို့ရဲ့ သားဖြစ်ပါတယ် …
(၈) Zeus - နတ်ဘုရားများ၏ ဖခင်ဖြစ်ပါတယ် … ဂရိတွေကတော့ ယောင်္ကျားများရဲ့ဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ် … ကောင်းကင်ကိုအစိုးရသောနတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် … Olympus တောင်ရဲ့ အရှင်သခင်လဲဖြစ်ပါတယ် … ဂရိ ဒဏ္ဍာရီလာ သူရဲကောင်းများရဲ့ ဖန်တီးရှင်အဖြစ်လဲ ယုံကြည်ကြပါတယ် …
(၉) Aphrodite - အလှတရား နဲ့ အချစ်နတ်ဘုရားမဖြစ်ပါတယ် … သူမဟာ ရှိရှိသမျှ နတ်ဘုရားမ များထဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်ပေမယ့် ရုပ်အဆိုးဆုံး နတ်ဘုရား Hephaestus ကို လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် …
(၁၀) Athena - အမျိုးသားများ ရဲ့ နတ်ဘုရားမဖြစ်ပါတယ် … တကယ်တမ်းပြောရရင် သူမရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ် သီသန့်မရှိပေမယ့် အမျိုးသားများကို အထူး အခွင့်အရေးတွေပေးတတ်တဲ့ အတွက် ဂရိများက အမျိုးသားများရဲ့ နတ်ဘုရားမအဖြစ် ယုံကြည်ကြပါတယ် …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 9:37 PM 1 ထင်မြင်ချက်
Olympians ၁၂ ပါးကတော့ …
(၁) Hestia - နတ်ဘုရားမ ဖြစ်ပါတယ် ...အခြားအမည်တွေက Demeter နဲ့ Dionysus ဖြစ်ပါတယ် ... ရောမလို Vesta လို့ ခေါ်ပါတယ် ... Olympians ၁၂ ပါးထဲမှာ ပထမဆုံး မွေးဖွားလာသူပါ ...ဂရိတွေကတော့ အိမ်စောင့်နတ် အဖြစ် ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော နတ်ဘုရားမအဖြစ် သူမကို ယုံကြည်ကြပါတယ် ...
(၂) Hades - တမလွန်လောကရဲ့ နတ်ဘုရားပါ ...သေမင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး ...
(၃) Apollo – Titans နတ်ဘုရား Coeus ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Leto ( Latona ) နဲ့ Olympian နတ်မင်းကြီး Zeus တို့မှ မွေးဖွားလာပါတယ် ... Apollo ရဲ့ အမွှာညီမကတော့ ယခုထိ အပျိူစင် နတ်ဘုရားမလေး ၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုစောင့်ရှောက် တဲ့ Artemis ( Diana ) ဖြစ်ပါတယ် ... Apollo ရဲ့ သားကတော့ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်တဲ့ Asdepius ဖြစ်ပါတယ် ... Apollo ဟာ နေနတ်ဘုရား ၊ အမှန်တရား နှင့် ဂီတ ကို စောင့်ရှောက်သောနတ်ဘုရားအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ် ...
(၄) Ares - စစ်နတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် ...ဂရိတွေကတော့ သူ့အကြောင်း ဒဏ္ဍာရီတွေရဲ့နဲ့အတူ သူ့ကို ယုံကြည်မှု သိပ်မရှိကြပါဘူး ... သူ့အစား စစ်နတ်ဘုရားအဖြစ် Athena ကိုသာ ယုံကြည်ကိုးစားကြပါတယ် ... အမှန်တကယ်တော့ Athena ဟာ Ares ရဲ့ ၀ိဥာဉ် ကိန်းဝပ်သူသာဖြစ်ပါတယ် ...
(၅) Hermes -ကံကောင်းခြင်းတွေကိုသာယူဆောင်လာတတ်တဲ့နတ်ဘုရားအဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ် ... နတ်မင်းကြီး Zeus ရဲ့ တမန်တော်လဲဖြစ်ပါတယ် ...
... ...ဆက်လက်ရေးသားပါမည် ... ...
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 8:44 PM0ထင်မြင်ချက်
Olympians ၁၂ ပါး ( Monsiau ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်က ၁၈ ရာစုနှစ်ကဆွဲခဲ့ပါတယ် )
ဂရိ နတ်ဘုရားများ (၁)
“ နတ်သမီးအိပ်ဆေး ” ပုံပြင်လေးကို ရေးနေရင်း ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးချင်လာပါတယ် …
ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံစားမိတာလဲ ပါပါတယ် …
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတွေ ၊ ၀တ္တုတွေမှာ ဂရိနတ်ဘုရားအမည် တွေ တစ်ခါတစ်ခါ ပါလာတတ် ပါတယ် … အဲဒီကတည်းက သိချင်စိတ်နဲ့ ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာလေးတွေကို ဆောင်းပါးတစ်ခုအဖြစ် ရေးသားလိုက်ရခြင်းပါ …
ဒဏ္ဍာရီ ဗေဒ (Mythology) အရ ယခုလက်ရှိ နတ်ဘုရားများ (Gods) ၊ နတ်ဘုရားမများ (Goddesses) ဟာ စွမ်းအားထက်မြက်လွန်းလှသော နတ်ဘုရားများ (Titans) ရဲ့ သြဇာအရှိန်အ၀ါ မှေးမှိန်မှုအရ ပေါ် ပေါက်လာရပါတယ် …ယခုလက်ရှိ နတ်ဘုရားများကို အိုလံပီယာ ၁၂ ပါး ( Twelve Olympians ) လို့ခေါ်ပါတယ် …
Titans မှာလဲ ၁၂ ပါးပဲရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ် … Titans တွေနဲ့
Olympians တွေရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ Titans တွေမှာ တူညီတဲ့ သဘာဝလွန် စွမ်းအား (Supernatural Power) တွေရှိကြပြီး Olympians တွေကတော့ သတ်မှတ်ပေးထားခံရတဲ့နယ်ပယ်စွမ်းအားတွေပဲ ရှိပါတယ် … ဥပမာ - အချစ်နတ်ဘုရားမ ဟာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်သမျှပဲ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သလို ၊ စစ်နတ်သားဟာလဲ စစ်နဲ့ပတ်သက်သမျှကိုပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် …
ကျွန်တော်ကတော့ Olympians တွေအကြောင်းကိုပဲ ပြောပါမယ် …
Olympians တွေဟာ ဇု (Zeus) နတ်မင်းကြီးရဲ့ မျက်စိအောက်က အိုလံပတ်စ် တောင်ထိပ် (Mount Olympus) မှာစံစားကြပါတယ် …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 7:50 PM0ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော်ပြောသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် …
ကျွန်တော်၏ စိတ်ကူးသက်သက်များသာဖြစ်ပါတယ် …
စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ခြင်း အပေါ် နားလည်ခံစားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ …
( အစ်မမွန်ရေ … စိတ်နှစ်တာများသွားလို့ အိပ်ဆေးက ကဗျာမဟုတ်ဘဲ ပုံပြင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ … )
တစ်ခါတုန်းက … …
နေရဲ့ အလင်းရောင် မရတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာရှိတယ် … တစ်နှစ်ပတ်လုံး နှင်းတွေဝေဆိုင်းနေလွန်းလို့ နေအလင်းရောင် ဆိုတာ ရွာသူရွာသား တွေအတွက်တော့ ဝေါဟာရတစ်ခုအရ သာ ကြားဖူးပြီး လက်တွေ့မမြင်ဖူးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ … လ ရောင် လာတဲ့ အခါ ရွာသားတွေက အမဲလိုက်ကြ ၊
ရွာသူတွေက သစ်သီးဆွတ် ကြတယ် … လ ရောင်ပျောက်ကွယ် သွားတဲ့ အချိန်ဟာ ရွာသူရွာသားတွေအတွက်တော့ ဆောက်တည်ရာမဲ့ချိန်ပါပဲ … အအေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့လက်လုပ်တဲ လေးတွေထဲမှာပဲ ပုံးအောင်းအိပ်စက်ကြရတယ် … လရောင်ဟာ ကံကောင်းခြင်း တွေကို ယူဆောင်လာ သလို ၊ လရောင်ကို နှုတ်သိမ်းသွားတဲ့ အမှောင်ထုဟာလဲ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ယူဆောင်လာ တယ်လို့ ရွာသူရွာသားတွေက ယုံကြည်ကြတယ် … ရွာသူရွာသားတွေအတွက် နောက်ထပ် ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုလဲရှိတယ် …အဲဒါကတော့ အမဲလိုက်ကိရိယာတွေကို ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပန်းပဲသမားလေးရှိနေခြင်းပါ … အမဲလိုက်ကိရိယာတွေကို သစ်သီးနဲ့လဲ ပါတယ် …
တောကောင်သားနဲ့လဲ ပါတယ် …
တစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့ အဲဒီရွာလေးဟာ နေရောင် လ ရောင် စုံလင်စွာနဲ့ နေချင်စဖွယ် ရွာလေးပါ … နေရောင်ပျောက်ကွယ်သွားရခြင်းကြောင်းက ဒီလိုပါ …
ကမ္ဘာပေါ်ရှိရှိသမျှ မြို့ရွာ အားလုံးထက်စာရင် အဲဒီရွာလေးဟာ ကောင်းကင်ဘုံနဲ့အနီးဆုံး နေရာမှာရှိပါတယ် … “ အပိုလို ” နေနတ်သားနဲ့ သက်တံ့နတ်သမီး “ အိုင်းရစ် ” တို့မှာ သမီးလေးထွန်းကား လာတဲ့အခါ နတ်ဗိမ္မာန်တစ်ခု ပေါ်လာရပါတယ် … အဲဒီဗိမ္မာန် ကပဲ ရွာကလေးထံနေရောင်မရောက်အောင် ကာဆီးထားခဲ့တယ် … နတ်သမီးလေး ကတော့ ဒီအကြောင်းကို ယောင်လို့တောင် မတွေးမိခဲ့ဘူး … အလှနတ်ဘုရားမ “အဖရိုဒိုက်” ကိုတုနှိုင်းတဲ့အလှတွေနဲ့ ကြယ်သတို့သားများစွာခြံရံ ကာ နေခဲ့တယ် … အတိတ်ကံကြမ္မာဝဋ်ကြွေးဆိုတာ နတ်သမီးလဲမရပါဘူး … နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ သာ စံစားရမယ့် ဇာတာတစ်ခု နတ်သမီးလေးမှာ ပါလာ ခဲ့တယ် …
အခုဆို နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးပါပြီ …
… … ဆက်လက်ရေးသားပါမည် …. ….
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:09 PM0ထင်မြင်ချက်
အလင်းတို့ ခိုး ခိုး ပြီး တံခွန်ထူကြ … …
ပန်းပွင့် ကို တူးဆွခဲ့ သလား …
မနက်ဖြန် လဲကျစေခဲ့တယ် … …
ကောင်းမွန်စွာ ထုပ်ပိုးထားပါကွယ် …
တောင်တန်းကိုလဲ ဖောက်ချင်တယ် … …
အစကို ပြန်ပြန် ရောက်လာပြီး …
ကမ္ဘာကို ကြိုဆိုချင်လာတယ် … …
ငါ နဲ့ ငါ့အရိပ်လေးကတော့ …
ချပ်ဝတ်တန်ဆာတွေ ပြင်သ …
စစ်မောင်းသံကို ကြားရတယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 1:33 AM3ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော် တတိယနှစ်လောက်က ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးပါ …
ခံစားပေးကြပါအုံး … …
ရူးခဲ့ရတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးရေ …
ကျန်းခမ်းသာလို့ မာပါစ … …
ပင်လယ်တွေ ပြာသေးလား …
ကောင်းကင်ကြီးရော ပြာသေးလား …
သ , သ နေခဲ့ပေါ့ … …
ဘယ်တွေးခဲ့ ဖူးမလဲ …
“ တေ့လွဲ ” ဆိုပေမယ့်
ဒီ အသဲကတော့ ကွဲတာပါပဲ … …
အိပ်မက်တောင် စည်းမကျော်ကြေး …
ပလက်ဖောင်းလေးကိုပဲ ပြောဖြစ်တယ် … …
ချစ်သူ … … !
ငါတို့ မဝေးဘူး …
ဘ၀ကို လက်ပစ်သာကူးခဲ့ပါကွယ် …
သနပ်ခါးပန်းတွေ ပွင့်ပါတယ် …
အခုတော့ … နေရစ်ခဲ့ပါကွဲ့ …
ငါ့အနာဂတ်မှာ ရေးမယ့် …
... … ရှည် … … … တယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 10:50 PM 1 ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော် ရေးနေကျ ပုံစံကို သွေဖယ်ထားတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ …
စကားလုံးတွေကြတ်နေရင် ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး …
ဒီကဗျာလေးမှာတော့ ကျွန်တော်က အကြောင်းအရာကို အဓိကထားပါတယ် …
ခံစားဝေဖန်ပေးကြပါအုံး ခင်ဗျာ … …
ဘယ်သူယုံမှာလဲ … …
ကုလားအုတ်က လူကို စီးတယ် … …
ကန္တာရသူ ကန္တာရသားတွေ ကျေနပ်ကြ
သူတို့ အရင်းမကျေ မှန်း သိကြ ပေါ့ … …
သက်ပြင်းတွေ အစင်းစင်း ခြွေကြ …
တိတ်တခိုး တက်ခေါက်ကြ …
ကန္တာရတော်လှန်ရေး ကို စ ကြတယ် … …
မီးခိုးလှိုင်းတွေလဲ မုန်တိုင်းလို မှိုင်းလို့ …
လူသံ၊ ကုလားအုတ်သံတွေလဲ ပြိုင်းရိုင်းလို့ …
ကံကြမ္မာကလဲ သူ့ရဲ့ စစ်မြင်းကို သ လို့ … …
လူက ကုလားအုတ်ကို ပြန် စီးတယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:04 PM 1 ထင်မြင်ချက်
အက်ဆစ်မိုးတို့ ညိုကြပြီ … …
လမ်းတိုင်းက ဆူးခင်း …
မျှော်လင့်ရင်း အဆိပ်သင့် …
အံကြိတ်ခြင်းအကျင့်လဲ ရခဲ့တယ် …
ငါတို့ဘ၀တွေ မွှေးမြခဲ့ပါရဲ့ … …
ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေ အရောင်ပြောင်းတဲ့အခါ …
ငါ့အတောင်ပံတွေ မိုးစိုတဲ့အခါ …
ကိုယ့်အရိပ်ကိုယ် ၀ှက်ရ …
အိပ်ကပ်ထဲက “သုည” လေးကို ကာကွယ်ရ … …
ကွာကျဖို့သင့်ပါပြီ မျက်နှာဖုံးတွေရယ် … …
ကြယ်တစ်ရာ လဲ မခြံရံ ကြနဲ့ …
ငါ့အိပ်မက်ရဲ့ ဈာပန ကို
ငါ့ဖာသာပဲ ချချင်တယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 10:27 PM3ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်လေး သန္ဓေတည်ခဲ့ရခြင်း
အထူးခြားဆုံးကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမှတ်တရထားချင်စိတ်တွေပြန်လည်နိုးထလာလို့ပါပဲ …နားရှုပ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်…ဒီလိုပါ …တစ်ခါက … ချစ်သူသက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်ကို မမှတ်မိတဲ့ကျွန်တော့်ကို …ချစ်သူကစိတ်ဆိုးဖူးပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ …အဲဒီနေ့ကို ကျွန်တော်ကမှတ်မထားမိလို့ပါ …ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ …ခက်တယ် … …
လိုရင်းကိုပဲပြောပါတော့မယ် … ချစ်သူကြောင်းပြောနေရရင် လူတိုင်းလူတိုင်း ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ဖြစ်တတ်လို့ပါ … …
ကျွန်တော်လဲ ကဗျာတွေရေးပြီရင် ကော်ပီလေးတော့သိမ်းထားတတ်တယ်…စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ပေါ့ ...တစ်ရက်တော့ …သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဲဒီစာအုပ်ကိုလာငှားတယ် …ဖြစ်ချင်တော့ … အဲဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ ဒီနေ့အထိ အဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူး …ကျွန်တော့်မှာတော့ …သားသမီး အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတဲ့မိဘလို …သံယောဇဉ်ကလဲ မပြတ်ဘူး …. ဘယ်လိုက်ရှာရမှန်းလဲ မသိဘူး …
အဲဒါနဲ့ပဲ ဂိုထောင်တစ်ခု ( Hosting ) တွေ့တာနဲ့ …ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကို … …သိမ်းဆည်းတဲ့သဘောပါ …
နောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ … …
ကဗျာဆိုတာ … … ကဗျာဆရာမက်တဲ့အိပ်မက်ပါ …အိပ်ရာကနိုးလာတိုင်း ပြန်ပြန်ပြောပြချင်သလိုမျိုး …. ….
ကဗျာဆိုတာ … …ကဗျာဆရာရဲ့ ၀မ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားတာပါ …ကိုယ့်ရင်သွေးကို… လူပုံအလယ်မှာတင့်ဆန်းစေချင်သလိုမျိုး … ...
ကျွန်တော် ……ဒီ “ နေရာလွတ်များ ” ဘလော့ဂ်ကို ရေးပါတယ် … … တည်ညိမ်းကို
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 3:49 AM0ထင်မြင်ချက်
လွမ်းဖျားလွမ်းနာပါတယ် … …
အခါခါတမ်းတရမယ့် ဝေဒနာပါတယ် … …
မျှော်လင့်ချက်အသေတစ်ခုပါတယ် … …
တစ်ဘ၀ကို နှစ်ခါသေခိုင်းရက်ခဲ့ … …
ငါ့အတွက်တော့ ပုဂံကရွေ့ခဲ့ပြီ … …
ကျောခြင်းကပ်ရင်းဝေးခဲ့ပေါ့ … …
ကောင်မလေးရေ … …
အလင်းတွေပဲ သယ်ခဲ့တာပါ …
မီးကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 5:05 PM0ထင်မြင်ချက်
မျက်စိနောက်စရာများဖြစ်သွားသလားမသိပါဘူး … ….
ဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမြင်ချင်တာ ကျွန်တော့်ဆန္ဒပါ … …
လှပ တောက်ပြောင်စေချင် သလိုမျိုးပေါ့ …
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် …
ကျွန်တော့်ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီး မွေးထားခဲ့ရတာပါ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:55 PM0ထင်မြင်ချက်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောင်ကျွမ်းနေမှန်းသိခဲ့ရ … …
မပြင်းပြပြန်ဘူး … …
ကဗျာတွေကိုလဲ စိတ်နာတတ်ခဲ့ပြီ … …
လွမ်းခွင့်တွေရောရှိရဲ့လား … …
( တစ်ယောက်ထဲ )
မနိုင်ဝန်ထမ်းနေခဲ့ရပေါ့ … … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:54 PM0ထင်မြင်ချက်
ကြီးပြင်းလာလိုက်တာ ... ...
အရာရာကို ဆုတ်ကိုင်လိုက် ...
တစ်ခုမှမကျန်အောင် လွတ်ကျသွားလိုက် ...
သူတို့တစ်ဘ၀စာ ... ...
ရွှေမှုန်ကြဲသော အိပ်မက် ...
ပြင်းပြစွာ တပ်မက်မှုများ ...
မုတ်သုံလာလာ မလာလာ ရွက်လွှင့်မယ်
လူပြောများတဲ့ အဲဒီပင်လယ်ထဲမှာ ... ...
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:51 PM0ထင်မြင်ချက်
ငါ မကြိုက်တဲ့အရောင်နဲ့ … …
ငါမကြိုက်တဲ့ရနံ့နဲ့ … …
ငါကြိုက်တဲ့ပန်းက ပွင့်လန်းနေလိုက်ပုံများ … …
စိတ်လိုလက်ရ ရှိရဲ့လား … …?
အဲဒီပန်းလေးကြွေတုန်းက ပျံသွားတယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:48 PM0ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော့်ကို ကဗျာတွေချစ်တတ်လာအောင် …
ကဗျာရေးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် …
ဆရာတာရာမင်းဝေ ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့မြင်ဆရာတစ်ယောက်ပါပဲ …
ဘလော့ဂ်အဖွင့်မှာ ဆရာ့ရဲ့ကဗျာလေးနဲ့ပဲ စတင်ပါရစေ … …
ထိရှခဲ့တဲ့ သွေးမဲ့ဒဏ်ရာ တစ်ချက်ပါ
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ … ….
အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ… … တဲ့။
မေတ္တာ ကိုပဲ့တင်သံနဲ့ပဲ ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သူ။
ငါ့လက်သီးထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့
ရုတ်ချည်း မှောင် အတိကျသွားတဲ့
အန္တ တို့ရဲ့ အိမ်အိုမှာ
... … ကိုချစ်တယ်လို့
ငါ့ဆီမှာ မြေမှုန်တွေ စွန်းထင်လျှက်ပါပဲလေ။
သရဲခြောက်ရာ ညတစ်ည ကို..ပိုသတိရတတ်တယ်”
အကြွင်းမဲ့ ဖော်ပြသွားခြင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါကလည်း “အဓိပတိဘွား” ဖြစ်ချင်ခဲ့တာကိုး။
ဘယ်သူမှ မပြောချင်တဲ့ စကားတွေပွေ့ပိုက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် “လူမိုက်” လို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်။
ဗီးနပ်စ် ရဲ့ နက္ခတ်တို့ တလက်လက် ပြာဝေမှုန်သင်း
ပန်းရုပ်လွှာ ကို မျှော်တွေးရင်း
ဆွေးလျညှိုးခွေ ဖြေမပြေသူလေး အတ္ထုပ့တေိ
မြင်းကကြိုးတို့ကို ပြင်လို့ သ လို့နေခဲ့ပေါ့။
ဗလာစာအုပ်ပေါ်က သုည ကမြတ်တယ် တဲ့
အန္တ တွေက ၀ိုင်းမေးတော့
နှင်းဆီဝိညာဉ်မှာ တင်တဲ့ ကမ္ဗည်း
ငါ့ရဲ့ ကံကော်ရွက် ဖဲချပ်ကလေးတွေ
တစ်ခြမ်းပဲ့ လ ပဲ ဖြစ်တယ်။
ငါမြတ်နိုးတဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ ထိပ်ထားကို
တစ်ခြမ်းပဲ လ က
အလံမလံမီ ည ဖြစ်တယ်။
အရာအရာကို လက်ဖြန့် မိုးစောင့်ရှောက်ချင်တဲ့လူငယ်
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:45 PM0ထင်မြင်ချက်
ဒုတိယအရာကို ငါ..ငြင်းတယ် ...
( တာရာမင်းဝေ )
အဲဒီ နေရောင်ခြည်ကိုက ရှုပ်တယ် ...
ပြန်ပြန်မှောင်ရတာနဲ့ မကာမိလို့ ...
တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် )
တံခါး တံခါး ဘယ်သူဆွဲဖွင့်လိုက်တာလဲ ငါ့ခန္ဓာနဲ့ ကွ...
အိပ်မက်ထဲကပုံပြင် အိပ်မက်ထဲကပုံပြင် စည်းရိုးတွေ ...
ကြေးသွန်းနှင်းဆီ ကြေးသွန်းနှင်းဆီ နတ်သမီးအစောင့်...
၀င်္ကကချေသည်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း ကျွန်တော် ကေ...
ရင်ကွဲသီး ရင်ကွဲသီး ငါဟာ … လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပစ်ချခံခ...
၁၄ ၁၄ အိပ်မက်ကနှိုးလို့ နံနက်ခင်းကို မိုးပြီး ကြည...
အရောင်မဲ့ ခန္ဓာ အရောင်မဲ့ ခန္ဓာ ဒီလိုနဲ့ … ၀ှက်ဖဲတ...
အိပ်တန်းပြန် အိပ်တန်းပြန် အတိတ်က ဘ၀ကို မေ့ခဲ့ … ...
အဖြစ်အပျက် အဖြစ်အပျက် သူ့ သဘောသူဆောင်တဲ့ မနက်တွေ...
လ ရောင်ခေါက်သိမ်းခြင်း လ ရောင်ခေါက်သိမ်းခြင်း တေ...
နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၆ ) နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၆ ) အချိန...
နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၅ ) နောက်ပိုင်းရက်များမှာတော့ ပ...
ကျွန်တော် နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား ဘ၀က “ ၀င်္ကကချေသည...
ပြာသိုလပြည့် ( အမေနေ့) က ကျွန်တော့် မေမေနဲ့ ဖုန်းေ...
နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၄ ) ကျွန်တော့်ရဲ့ နတ်သမီးအိပ်ဆေး ...
နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၃ ) နတ်သမီးအိပ်ဆေး ( ၃ ) အိပ်ရာ...
နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၂ ) နတ်သမီး အိပ်ဆေး ( ၂ ) မ...
မီးအိမ်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း မီးအိမ်ကို ဖွင့်ကြည့်ြ...
ဂရိနတ်ဘုရားများ (၄) ဂရိနတ်ဘုရားများ (၄) (၁၁) Art...
ဂရိနတ်ဘုရားများ (၃) ဂရိနတ်ဘုရားများ (၃) (၆) Heph...
ဂရိနတ်ဘုရားများ (၂) ဂရိနတ်ဘုရားများ (၂) Olympian...
Olympians ၁၂ ပါး ( Monsiau ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်ပန်းချီဆရ...
နတ်သမီးအိပ်ဆေး (၁)ကျွန်တော်ပြောသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ြ...
ပိုး ပိုး မိစ္ဆာတွေကြီးစိုးရာ အရပ်မှာ အလင်းတို့ ခ...
မှတ်တမ်း ကျွန်တော် တတိယနှစ်လောက်က ရေးထားတဲ့ကဗျာလေ...
ကန္တာရပုံပြင် ကျွန်တော် ရေးနေကျ ပုံစံကို သွေဖယ်ထား...
မှော် မှော် ခရမ်းပြာ တိမ်ခိုး အက်ဆစ်မိုးတို့ ညို...
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်လေး သန္ဓေတည်ခဲ့ရခြင်း အထူးခြားဆံ...
သံချေးတက်ခြင်း သံချေးတက်ခြင်း နောက်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့...
အနီရောင် အနီရောင် တစ်စတစ်စ ပြင်းရှလာလိုက်တာ မီးခ...
ခရီး ခရီး ကောင်းကင်ကို မော့မော့ကြည့်ရင်း ကြီးပြင...
အလွဲ အလွဲ ငါ မကြိုက်တဲ့အရောင်နဲ့ … … ငါမကြိုက်တဲ...
ကျွန်တော့်ကို ကဗျာတွေချစ်တတ်လာအောင် … ကဗျာရေးချင်စ...
“ ၀င်္က ကချေသည် ” - ကဗျာစုစည်းမှု (10)
နတ်သမီးလေးရဲ့ ပုံပြင် - မွန်
အဖြူရောင်သံဇဉ် - ကဗျာ
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာလွယ်အိပ်လေး - သားဖြိုး
အိပ်မက်တောအုပ် - ကိုနေသစ်
ပန်းခရေ - စိန်မမ